ohnmar November 10, 2012 - 10:48 am သိပ်ကိုခံစားရပါတယ်။ လက်ခံပေးထားတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply FOX November 10, 2012 - 12:28 pm သိပ်ကိုလေးနက်လွန်းပါတယ်…ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာလည်းအဲ့လိုသဘောထားကြီးစည်းလုံးပြီး နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကိုပဲ ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမယ်ဗျာ…
Reply KHUN KYI HAN November 10, 2012 - 4:08 pm GOOD NEWS.YOU GUYS ARE LUCKY.YOU WANT TO GO THERE AND “THEY WANT YOU TO COME TOO”.HOW NICE?HOPE, YOU GUYS RESPECT TO THEIR COUNTRY AND PEOPLE.ONLY GOOD MIGRANTS CAN BE GOOD CITIZENS.BE PROUD TO BE A NORWEGIAN BROTHERS.CHEERS
Reply ဘကြီး November 10, 2012 - 8:53 pm သူများ နိ်ုင်ငံသား လုပ်ချင်ရင် သူများနိုင်ငံ ရဲ့ ဥပဒေ နဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းကို လိုက်နာရမယ် ဒါမှ လူသားစင်စစ်ဖြစ်တော့မည်တည်း။
Reply မင်းကြီးညို November 11, 2012 - 8:00 pm နိုဘယ်လ်ဆုရှင်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နော်ဝေးအစိုးရဟာ အကြင်နာတရားနဲ့ပြည့်စုံ
Reply Myo han November 12, 2012 - 8:12 pm You wasarefugee too bro.Bawa ma mae ne.Ma saw kar ne.Kochin sar.
Replyူlady November 12, 2012 - 12:35 pm မင်းကြီးညိုရဲ့ အဆိုကိုထောက်ခံပါတယ်..ဘင်္ဂါလီတွေသူများနိုင်ငံမှာ လူလိုနေတတ်ခဲ့ရင် ရခိုင်မှာ ဒီလိုပြသာနာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး..
Reply An Exile man November 12, 2012 - 2:32 pm ကျနော်လဲ မလွှဲမရှောင်သာလို့ နိုင်ငံသားဖြေရတော့မယ်ဗျာ။
Reply mr TM November 13, 2012 - 8:23 pm ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံကအဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်မှာနေတဲ့မင်းတို့ရခိုင်တွေကဘင်ဂါလီတွေကို အမှိက်ထုပ်တွေလို့ဆိုတယ်၊ကနေ့မင်းတို့လုပ်နေတဲ့အမျိုးသားရေးဆိုပြီးဘင်ဂါလီတွေကိုမောင်း ထုတ်နေတာကဘင်ဂါလီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမက်မောပြီလူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ဘဲမင်းတို့ဘယ် တော့မှဆင်းရဲမှုကနေကင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့မယှဉ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့နိုင်ငံမှာနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံ နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကဘင်ဂါလီတွေကိုမောင်းထုတ်နေတယ်၊မင်းတို့ကပြော အုံးမယ်သူတို့ကကျူးကျော်သူတွေဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်သူတွေလူ့အစွန်း ရောက်တွေလို့ ၊ဘယ်သူတွေကျူးကျော်လာသလဲ?အစိုးရကဥပဒေအရအရေးယူလိမ့်မယ်။ စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သူလူ့အစွန်းရောက်ဘယ်သူတွေလဲ?တောင်ကုတ်မှာလူသတ်သူတွေ အိမ်မီးရှို့ပြီးမောင်းထုတ်သူတွေတိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်နိုင်ထက်ဆီးနင်း လုပ်တဲ့သူတွေဒုက္ခသယ်အတွက်အကူအညီတွေပိတ်ပင်တာတွေဘယ်သူတွေလုပ်နေတာလဲအဖြေကိုလိုခြင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါ၊ Ohnmar နဲ့ Fox တို့လိုရခိုင်တွေလဲနားလယ်စေချင်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိလာတဲ့တနေ့မှာ မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းလာပါလိမ့်မယ်။
Reply Min Gao November 14, 2012 - 2:00 pm You know best how your ethnic set their hearts. We do know about you too. Could you please give up your dream of Islamic State establishment in our land? You surely are not natives nonetheless we can accept you as our citizen when appropriate conditions are met. Withafake name and disloyal mindsets we simply don’t want you as our folks. Got it and call me racist!
Reply Sai Lao November 14, 2012 - 11:48 am I am also missing my mother, my family, my friends and my Shanland . Hope to be come back homeland one day. New york Shan.